भूकम्पपीडित पुनर्कर्जा ८ सय जनालाई | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) भूकम्पपीडित पुनर्कर्जा ८ सय जनालाई
सरकारले भूकम्प प्रभावितहरूलाई घर पुनर्निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुुनर्कर्जा दिने निर्णय गरेपछि हालसम्म करीब ८ सय जनाले त्यस्तो कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार देशभरका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सीमित भूकम्प प्रभावितले हालसम्म रू. १ अर्ब २७ करोड ९१ लाख कर्जा लिएका हुन् । गत वैशाख मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत उक्त कर्जा ६७ करोड ५० लाख २५ हजार रुपैयाँबराबरको प्रवाह भएको थियो ।
३ वर्षअघि आजैका दिन गएको विनाशकारी भूकम्प र यसका पराकम्पबाट देशभर ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ निजी आवास पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । तर, सीमित व्यक्तिले मात्र उक्त कर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भूकम्प प्रभावित परिवारलाई घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७२ मा आधारित भई सरकारले वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकामा रू. २५ लाख र उपत्यकाबाहिर रू. १५ लाखसम्म घरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थामार्फत उक्त कर्जा प्रवाह भएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष (२०७२/७३)मा आठओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत २८ जनालाई रू. ५ करोड ९० लाख २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुुनर्कर्जा प्रवाह गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वैशाख मसान्तसम्ममा कुल रू. ६७ करोड ५० लाख २५ हजार कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार वैशाख १० गतेसम्मको तथ्याङ्कमा २ सय ७९ जनाले यो सुविधा प्राप्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट करीब ४ लाख ९८ हजार घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । करीब त्यति नै घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । तर, सरकारले देशभर घरबारविहीनलाई मात्र लक्षित गरेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको कर्जा सीमित व्यक्तिले मात्र लिन सकेकाले खासै प्रभावकारी हुन नसकेको बुझिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १६ बुँदे कार्यविधि र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिका कारण कर्जा प्रवाह प्रभावकारी नभएको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको कार्यविधि–२०७२ अनुसार भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई बस्न योग्य घर नभएको अवस्थामा मात्र वार्षिक २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो कर्जालाई खासै प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गरेका छैनन् । भक्तपुरमा सञ्चालित एक बैङ्कले आफ्ना चिनेजानेकालाई मात्र कर्जा प्रवाह गरेको नाम नखुलाउने शर्तमा एकजना (स्रोत)ले बताए । उनका अनुसार बैङ्कले आफ्ना चिनेका विश्वासिला भूकम्पप्रभावितलाई कर्जा प्रवाह गर्दा जोखीम नहुने भएर यस्तो गरेको हुन सक्छ । अथवा बैङ्कले यो कर्जा दिएको तथ्याङ्क सरकारलाई देखाउन पनि हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
काठमाडौं पुरानो नैकाप निवासी राजु कार्की भूकम्पबाट घर क्षतिग्रस्त भएपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका थिए । बैङ्कबाट कर्जा लिन घर बनाउने जग्गा १३ फिटे बाटोमा हुनुपर्ने भनेपछि कर्जा लिन नसकिएको उनले बताए । ‘बैङ्कबाट भूकम्पपीडित कर्जा लिन साह्रै झञ्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘धेरैथरीका कागजात समेट्नुपर्छ, तोकिएको विवरण पुर्‍याउनै सकिँदैन ।’
भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने भनिएको त्यस्तो कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले करीब १ सय जनालाई दिएको बैङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए । उक्त भूकम्पपीडितलाई चार किस्तामा हालसम्म करीब १२ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा प्रवाह गरिएको उनले बताए । यस्तै, केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको कार्यविधि र बैङ्कको नीतिनियममा आधारित भएर कर्जा दिने गरिएको सानिमा बैङ्क, कलङ्की शाखाको कर्जा विभागले बताएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको हालसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा ‘क’ वर्गका २८ ओटा, ‘ख’ वर्गका ३६ ओटा र ‘ग’ वर्गका २५ ओटा बैङ्क सञ्चालित छन् । तर, भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशतमा पुनर्निर्माण कर्जा भने सबै बैङ्कबाट पर्याप्त रूपमा प्रवाह भएको छैन । जब कि, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि शून्य प्रतिशतमै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता पौडेलले केन्द्रीय बैङ्कले कार्यविधि बनाएर यस्तो कर्जा भूकम्पपीडितलाई दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको बताए । ‘सबै बैङ्कले कर्जा दिएका छैनन्, यो सामाजिक कर्जा भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिन गाह्रो मानेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर शून्य ब्याजदरमा हामीले बैङ्कहरूलाई यस्तो कर्जा दिइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैङ्कको कार्यविधिका अतिरिक्त लगानीको सुरक्षाका लागि बैङ्कले आफ्नो नियमसमेत प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार छ ।